Faallo:- Galgalashada siyaasadeed ee Madaxda Isbahaysiga Maamulada Goboladda oo waayey saaxiibadii naftoodu harsaneysay – Madal Furan
Hoy > Fikradaha > Faallo:- Galgalashada siyaasadeed ee Madaxda Isbahaysiga Maamulada Goboladda oo waayey saaxiibadii naftoodu harsaneysay
Editor October 22, 2018 October 22, 2018 Fikradaha, Warka 0
Garoowe (Madal Furan) Madaxda Maamulada Goboladda Soomaaliya oo ay muuqato inay ku qaadeen xamlad weerar ba’an ah Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay doonayaan inay jilbaha ugu laabaan.
Dadka siyaasadaha falanqeeeeya ayaa rumeysan inay Madaxda maamulada Soomaaliya xiligan ka jira ay u muuqato in wakhtigii xukunkoodu uu gabaabsi yahay, taasina ay tahay xaqiiqada kulmadoodu u noqdeen kuwo isdabajoog ah oo ay ku meel dayanayaan fursad ay ku meel marin karaan sharciyad u sameyn karta mudo dheereysi.
Caqabadaha hortaagan Isbahaysiga Madasha Maamuladda Goboladda ayaa yeelanyaa dhowr weji oo suurtagal ka dhigaya inay noqdaan kuwo meel u waaya dagaalka ay ku kiciyeen DFS.
Markii uu Raysal Wasaare ka noqday waddanka Itoobiya waxaa mar keliya isbedelay siyaasadda Geeska Afrika, taasina waxay meesha ka saartay in Madaxda maamuladda soomaaliya ay galangal ku yeeshaan la kulanka madaxda dowladda Itoobiya.
Waxaa sidoo kale meesha ka baxay xubin muhiim u aheyd maamuladda goboladda, kadib markii xilka laga qaaday Madaxii ciidamadda AMISOM Mr. Gabre, waxayna Madaxda Goboladda Soomaalidu waayeen saaxiib aad ugu dhega nuglaa oo ka xigsan jireen nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo Madaxda maamuladda Goboladu dhabarjab hor leh kala kulmeen isbedelka siyaasadeed ee lagu sameeyey xafiiska QM ee Soomaaliya wixii ka danbeeyey markii xilka laga qaaday Danjire Keating oo khabiir ku noqday mudadii uu dalka joogay sida loola macaamilo Madaxda Soomaaliya qaybaheeda, baalse ninka cusub ee xafiiskaas loo soo magacaabay ayaa weli wuxuu saantiisa dhulka u dhigayaa si degenaan leh, isagoo masuuliyiinta DFS iska xejinaya culeysyada siyaasadeed ee Maamulada Goboladda Soomaaliya iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka ku ah DDFS.
Beesha Caalamka oo la dhacsan haanaanka ay DFS u maareeysay arrimaha maaliyadda Soomaaliya, isla xisaabtanka iyo xisaab celinta, iyo sida ay ula dhacsan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxay kaabad aan laga talaabsan Karin ku noqotay Madaxda maamuladda Goboladda oo doonaya inay Dowladda FS ka helaan dhaqaale aan xisaab celin laheyn.
Arrintan qudheeda ayaa noqoneysa dharbaaxo kale oo Madaxda maamuladdu la kulmayaan, waxaana Xukuumadda Soomaaliya dhowaan ka codsatay Madaxda maamuladda Goboladda inay xisaab celin uga soo sameeyaan dhaqaalihii ay dowladda Dhexe ka heleen Labadii sanadood ee la soo dhaafay, taasoo ay weli jawaabteeda ka sugayaan.
DFS ayaa hufnaan maaliyadeed waxay u muujiyeen Bangiga Adduunka iyo Hay’adda IMF iyo Midowga Yurub ayaa Madaxda maamuladda Goboladda waxay ku noqotay laf dhuunta mari weyday.
Sidaas awgeed, Xukuumadda DFS ayaa awood u yeelatay inay la xisaabtanto Beesha Caalamka maadaama ay dhinacooda muujiyeen kobboc dhaqaale, isla xisaabtan iyo la dagaalan musuqmaasuqa oo masuuliyiin badan oo ka tirsanaa Laamaha Dowladda Federaalka ay xabsiga u galeen arrimaha musuqmaasuqa.
Ugudanbeyntii, Isbahaysiga Maamuladda Goboladda ayaa waxaa ku soo ligligan indhaha Beesha Caalamka oo ay u muuqato in Madaxda Madashada Goboladdu ay guntiga u dhuuqsadeen inay isku miisaan ka dhigaan xiliga doorashada Soomaaliya ee sanadka 2020 loo qorsheeyey iyo jiritaanka maamuladoodu inay isku wakhti noqdaan.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo soo gabagabeeyay wax ka bedelka sharciga hanti dhowrka guud ee Qaranka.
Midawga Afrika oo wakhti kama dambays ah u qabtay hoggaamiyeyaasha Suudaan
Fariisino u dhow Muqdisho oo ay ka baxeen ciidamadda dowladda oo ururka Al-Shabaab ay la wareegeen